Talo soo jeedin: Garaad Jaamacoow Khaatumo laba maaha!
Monday June 19, 2017 - 14:12:53 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Waxaan dhegeystay shalay 17/06/17 mudane Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka soo horjeestay heshiiskii Khaatumo iyo Somaliland. Garaadku inuu taageero
Waxaan dhegeystay shalay 17/06/17 mudane Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka soo horjeestay heshiiskii Khaatumo iyo Somaliland. Garaadku inuu taageero iyo inuu ka soo horjeestaba way u furnayd wuxuuse doortay inuu kasoo horjeesto oo weliba canbaareeyo. Waan ku ixtiraamayaa go'aankiisaas.
Garaadku wuxuu gunaanadkii kusoo xidhay hadalkiisa in wax uu ugu yeedhay "goleyaasha Khaatumo" ay degdeg isugu yimaaddaan oo la xisaabtamaan madaxdii heshiiskaas gashay si wadajir ahna go'aankaas looga noqdaa. Wuxuu kaloo intaa raaciyey "haddii loo baahanyahayna waa in shirweyne khaatumo la qabtaa".
Waxa xusid mudan in laga bilaabo bishii Apr 2011 ilaa iyo 16/06/2017 Garaad Jaamac Garaad Cali uu garab siinayey, oo difaacayey Dr. Cali Khaliif Galaydh wax alla iyo wixii Khaatumo iyo Cali Khaliif loo tirinayona Garaadku qayb buu ka ahaa.
https://www.youtube.com/watch? time_continue=657&v=Le2270KdWo E
Labadan su'aalood ayaa u baahan inaan is weydiinno si aan u fahhanno Khaatumada Garaad Jaamac dib ugu godlayo.
Waa maxayKhaatumo? Maxaysesoo kordhisay?
1)Khaatumo waa calaamadkala qaybsanaan, waa calaamad khilaaf, waxay ku bilaabantay khilaaf waxyna ku hoyatay Hargeysa iyadoo khilaafkeedii xambaarsan. Ilaahay ha isu barakeeyo iyada iyo Hargeysa.
2) Khaatumo Maxay soo kordhisay? Waxay soo kordhisay dhiig sokeeye oo daata. Waxay soo kordhisay tafaraaruq, waxay soo kordhisay barakac, waxay soo kordhisay degaanno cusub oo gacanta Somaliland gala, waxay soo kordhisay colaad la dhexdhigo raasas nabad u wada deggannaa degaannadooda (Taleex, Xuddun, Dharkayngeenyo, Dhummay iwm). Waxay soo kordhisay Madaxdhaqameedkii iyo dadkay madaxda u ahaayeen oo la iska horkeeno, waxay soo kordhisay in cumaamadihii Isimmada la gubo, waxay soo kordhisay in Isimmadii la yidhaahdo waa laydin casilay! Waxay soo kordhisay in Isimmo-ku-sheegyo loo cumaamado. Waxay soo kodhisay in saxaafadda laga caytamo oo qof, qabiil, iyo maamulloba aan waxba loola hadhin (Aflagaaddadii baa la jideeyey).
Haddaba astaanta Khaatumo ee noocaas ah ma tahay wax la isugu imaan karo oo dad midayn karta. Jawaabtu waa maya. Garaad Jaamac Garaad Cali iyo ciddii ay rajo ka hayso Khaatumo, ha ka daba tageen xaq bay u leeyihiine, Khaatumo guurtay iyadoo dhaqankeedii xambaarsanna waxay ta tagtay Hargeysa.
Garaad Jaamac Garaad Cali waxaan usoo jeedinayaa hadduu rabo in wax la saxo waa inuu talo ugu noqdaa Isimmadii kale ee reerka, waa inuu ka qaybqaataa shirkii wadatashiga ee loo ballansanaa in Buuhoodle lagu qabto sidaana kaga qayb galaa isagoo raaskiisa hoggaaminaya. Garaadka waxaan kaloo kula talinayaa inuu meel iska dhigo waxyaalihii khiyaaliga ahaa ee Khaatumo abuurtay ee aan waxba ka tarayn midnimada wadatashiga iyo wadajirka reerka Dhulbahante oo ay ka mid ahaayeen "Garaadka Guud". Waxaasi waxba u kordhin maayaan isaga iyo kuwa ku hafraya toonna. Garaad Jaamac waa Garaad ka soo jeeda Garaadnimo fac dheer, wuxuuse Garaad u yahay qoyskii boqraday ee Bahararsame ee uu adeerkii iyo aabbihii ka dhaxlay intaasaa sharaf ugu filan.
Dadka Dhulbahante waxaa la gudboon inay u diyaar garoobaan shirka loogu ballansan yahay Buuhoodle meel ay joogaanbana ay kasoo qayb galaan. Waxaan kaloo ku talin lahaa in dadka jooga Somaliland iyo Puntland iyo kuwa Khaatumadii xijaabatay aamminsaniba ay shirkaas yimaaddaan qaybna ka ahaadaan sidii xal loogu heli lahaa arrimaha murugsan ee degaannadaas ka jira. Waxaan intaa raacinayaa waa in laga digtoonaado in siyaasiyiin dano gurracan lehi sidii hore udhici jirtay aanay shirkaa afduubin oo meel ay sii astaysteen aanay dadka ugu afduubin. Dadkani Khilaaf horuu uga soo daalay mid danbena taag uma hayo.
Tallaabada koowaad ee shirkaas looga baahan yahayna waa inay ahaataa:
a) sidii khilaafaadka jira loo saari lahaa,
b) sidii kalsooni loo abuuri lahaa
c) iyo in intaa dabadeed sidii talo midaysan loo qaadan lahaa iyadoo dhammaan duruufaha inagu gedaaman dhammaantood la qiimaynayo.
Somaliland hadday dantu noqoto, hadday Puntland noqoto, hadday dawladda Federaalka ah maamul ka tirsan noqoto magacuu doono ha la baxee iyo hadday wax kale noqotoba waa inay shirkaa ka soo baxdaa.